Lithini ikhadi elibonakalayo? | Ezezimali
Lithini ikhadi elibonakalayo?
El lwezorhwebo Ayisosithembiso ngekamva, okanye umkhwa, iyinyani eSpain naseYurophu. Makhe sithethe kancinci ngayo urhwebo lwe-elektroniki eSpain. Lilizwe lesine elinemisebenzi emininzi ye-intanethi eYurophu, ngaphandle kwengxaki esele ikho kwiminyaka nje esibhozo kwilizwe lethu. Kuqikelelwa ukuba iSpanish nganye yathenga ama-21 kwi-Intanethi ngo-2015, ichitha i-avareji ye- € 661,62 inye. Sithetha nge-10,8 yeebhiliyoni zeerandi kwintengiselwano ye-intanethi.
Kodwa, ngaphandle kwale, kusekho uloyiko kubantu abangaqhelananga nayo. ukurhweba nge-elektroniki, Ukubhuka kukhulu: uloyiko lwentengiselwano yobuqhetseba, ukubiwa kwesazisi, ngaphezulu kweentlawulo ezicwangcisiweyo, kunye nokuvuza kwedatha.
Eyona nto ilungileyo kwaba bantu yile Ukusetyenziswa kwamakhadi abonakalayo, imveliso yemali, isimahla kumaziko amaninzi emali, ekhusela ukhuseleko kwaye ishiya lonke uloyiko olukhankanyiweyo ngaphandle kweempikiswano. Namhlanje sifuna ukukunceda ukuba wazi ngcono ukuba yintoni, basebenzela ntoni kunye namakhadi abonakalayo kulo nyaka, usathathelwa ingqalelo njengentsingiselo.
1 Athini amakhadi abonakalayo?
2 Lithini ikhadi elibonakalayo?
3 Lithini ikhadi elibonakalayo?
4 Nabani na onokuyisebenzisa
5 Nciphisa ixesha lokuphila kwakho
6 Inokukwenza ntoni?
7 Uyazikhusela kwii-hacks
8 Ngawaphi amakhadi angekhoyo?
9 Iintlawulo ezenziwa ngamaxesha athile
10 Ukufumana imbuyekezo
11 Ndingalifumana phi ikhadi lam elibonakalayo?
Athini amakhadi abonakalayo?
Amakhadi anyanisekileyo yimifanekiso eqingqiweyo yamakhadi okutsala, anceda ukufihla ukuba ngubani umniniyo. Yimveliso eyenzelwe ngokukodwa ukuthengwa kweselfowuni okanye kwe-intanethi. Uninzi lweebhanki sele lubonelela ngale nkonzo: kwiakhawunti yakho yebhanki, unokwenza ikhadi, apho unokongeza khona okanye ususe ibhalansi kwiakhawunti yakho yesiqhelo.
Eli khadi linani kunye nomhla wokuphelelwa, kodwa hayi igama lomntu. Icandelo ngalinye linemigaqo-nkqubo yalo, kodwa ngesiqhelo yonke into inokuqwalaselwa: ibhalansi, umhla wokuphelelwa unokukhethwa ngumthengi.
Umzekelo, unako yenza ikhadi elibonakalayo ene- € 300 yokulinganisela kwaye umhla wokuphela ungaphakathi kweveki.
Ngomnye wemibuzo ebuzwa kakhulu ngu abathengi bamaziko emali aseSpain, kubandakanya iSantander, i-BBVA, iLa Caixa, iLiberbank okanye iSabadell: ngawaphi la makhadi abonakalayo?
Yinto elula kwaye inzima kakhulu, kuba ukusetyenziswa kunye nezibonelelo zininzi kwaye kungxoxo kwibhanki yakho yewindows, isenokungabi yeyona ndawo ifanelekileyo yokufumanisa. Ngenxa yoko siya kukunceda.
Ukhusela isazisi sakho
Amakhadi anyanisekileyo anobubele ngokwaneleyo ukufihla ubunini bomnini wekhadi. Kutheni le nto iluncedo?
Iya kukunceda ngaphezulu kwako konke ukunqanda ubusela kunye nobusela bobuchwephesha, kuba zininzi iisoftware ezilandelela abanini beeakhawunti zebhanki ezisetyenzisiweyo, bade basebenzise i-malware kwiikhompyuter yoku.
Ngale ndlela, abayi kuba nakho ukwazi umnini wekhadi elibonakalayo, njengoko likho. Sisibonelelo esinamandla sobucala.
Uphepha ukusebenzisa imali engaphaya kwemali kwiakhawunti yakho yebhanki
Omnye ikhadi elibonakalayo yinto enje ngamakhadi amadala ahlawulelwa ngaphambili eselfowuni: ungongeza ibhalansi okanye uyisuse, kwaye ubambe loo mali kuphela.
Siza kukunika umzekelo olula: uza kuthenga iBlue Ray kwi "The Walking Dead" ebiza i- $ 99, kwaye iakhawunti yakho yebhanki inayo yonke irhafu yakho eyi- € 900. Nokuba kungasiphi na isizathu, eyona ndleko yi- € 108, kuba awuzange ubale iindleko zokuhambisa.
Kulula, kwikhadi elibonakalayo wongeza kuphela i-100 euros, kwaye ke uphephe iindleko zokumangalisa. Sibeke umzekelo omncinci, kodwa kunokuba ziindleko ezibalulekileyo ezinokongeza kuwe.
Unokwenza, umzekelo, wabela isixa esithile kwifayile yakho ye- ukuyithengisa ngekhompyutha, ngaphandle koloyiko lokugqitha kuhlahlo-lwabiwo mali onalo.
Nabani na onokuyisebenzisa
Uncedo oluncinci olwaziwayo nolusetyenzisiweyo amakhadi abonakalayo, kukuba zaziwa ngokubanzi kwaye zisetyenziswa nangubani na ukwenza nayiphi na intengiselwano kwi-Intanethi. Uninzi lwamashishini e-elektroniki amkela amakhadi etyala, enika inkululeko kumthengi ukuyisebenzisa, kwaye ungayisebenzisa naphina emhlabeni.
Oku kuyakuvumela ndiboleke imali ngaphandle kwesidingo sokuyiphatha. Udala ikhadi elibonakalayo, ulinike abantwana bakho okanye abatshana bakho, ukuze bathenge kwaye ulawule iindleko zabo ngaphandle kwalo naluphi na uhlobo lomngcipheko wabucala okanye inkcitho egqithileyo.
Nciphisa ixesha lokuphila kwakho
Ukongeza kokukwazi ukunciphisa umda kwikhadi elibonakalayo, ukunqanda ukuhlawuliswa ngaphandle kokucwangcisiweyo, ungaseta nomhla wokuphelelwa.
Ngokulula, ukuba umntu ubamba idatha, ubomi bekhadi abuncinci, kwaye abayi kuba nakho ukuyisebenzisa ngaphaya komncono kunye nomhla wokuphelelwa.
Ukongeza, bayinika isimilo samakhadi alahlwayo, esisiseko samakhadi abonakalayo, njengamakhadi ahlawulelwa kwangaphambili eselfowuni. Akukho bhetyebhetye kwinjongo yakho
Eyona ilungileyo kwezi amakhadi abonakalayo, kukuba azinakusetyenziswa ngaphandle kweenjongo zazo zokuqala. Oko kukuthi, ukuba wenza ikhadi elibonakalayo kwiziko lakho lezemali, alinakusetyenziswa, umzekelo, kwindawo ebonakalayo enika amanani, kwaye nguwe kuphela okanye nabani onenombolo yekhadi, onokulisebenzisa.
Khumbula i-Ashley Madison hack? Ukuba akunjalo, siza kukuxelela ngokukhawuleza. Yindawo yokuthandana yokuhlangana ngokwesondo. Umgqekezi weba wapapasha idatha yezigidi zabathengi bakhe kwihlabathi liphela, kubandakanya ezopolitiko, abadumileyo kunye nabantu ... kubandakanya namakhadi abo etyala.
Nge ikhadi elibonakalayo Uyaluphepha olu hlobo lomsitho kwaye ukhusele ukungaziwa kwakho kunye nokhuseleko lwakho, ngaphezu kwako konke.
Ngale ndlela awuthinteli ukusetyenziswa kuphela xa idatha inokubiwa kwiiwebhusayithi apho uthenge khona, ukuba ayikhuselwanga, loo ndawo, ulwazi lwabathengi bayo ngendlela efanelekileyo.
Ngawaphi amakhadi angekhoyo?
Ngokucacileyo, kufuneka sikuxelele izinto ezingalunganga kumakhadi akho abonakalayo, kuba kungenjalo. Sikuxelela iimeko apho ungafanele usebenzise amakhadi abonakalayo.
Iintlawulo ezenziwa ngamaxesha athile
Kukho iinkonzo eziphantsi kobulungu okanye indlela yobulungu, ezinje ngeNetflix, Yomvi, okanye ezinye iinkonzo ezihlawulwa ngamaxesha athile, zisenokuba ziinkonzo ezinje ngesicelo okanye isoftware yomsebenzi wakho.
Ngokwemvelo, Ukuphelelwa ngala makhadi kuncinci. Yisebenzise kuphela ukuba ufuna ukunciphisa ukusetyenziswa kwenkonzo kwaye isebenze kuphela ixesha lekhadi lakho. Ngale ndlela uyakuphepha ukulibala xa usenza intlawulo kwikhadi lakho eliqhelekileyo.
Ngapha koko, sicebisa ukuba singasisebenzisi kwezi njongo, ubuncwane bamakhadi abonakalayo kufuneka balahlwe, basebenzise kwaye balahle kude.
Un ukuphazamiseka kokuthenga ngamakhadi abonakalayo Oko kukuthi, ukuba uthenga iselfowuni kwi-intanethi, umzekelo, kwaye yafika inesiphene kwaye ucela ukubuyiselwa imali, uya kuba neengxaki, ngakumbi ukuba ikhadi sele liphelelwe lixesha.
Ukuba uza kuthenga into ebandakanya ukutshintshiselana okanye ukubuya, qala ujonge kwivenkile umgaqo-nkqubo wabo ngamakhadi abonakalayo, ukunqanda iingxaki, nangona ukusetyenziswa kwawo sele kuqhelekile, kusekho amashishini amaninzi angenawo umgaqo-nkqubo ocacileyo wokusingathwa olu hlobo lweemveliso.
Ndingalifumana phi ikhadi lam elibonakalayo?
Uninzi lwamaziko emali sele enayo le nkonzo icelwe ngabaninzi, abanye bade banyanzelise ukusetyenziswa kwayo kwintengiselwano ye-intanethi, oko ke bekhusela ukhuseleko lwabathengi babo, nokuba bayazifuna okanye abazifuni.
Ukuba ufuna ukusebenzisa ikhadi elibonakalayo, kwaye ufuna ukwazi izibonelelo, siphonononge okona kulungileyo amakhadi abonakalayo kwintengiso eSpain, ngeendleko zazo kunye nezibonelelo zazo nganye. Uninzi lwazo lusimahla kubaxumi okanye iindleko zabo ziphantsi kakhulu. Kwamanye amaziko azipapashi iimeko zokusetyenziswa, kwaye sibeke "Ukubonisana".
ICANDELO IXabiso INKCAZELO
BBVA Simahla Ungayidibanisa neapps yeselfowuni yakho, kwaye ungazichazanga ekusebenziseni amakhadi akho.
Unicaja Bank Simahla Ayililo ikhadi elihlawulelweyo, kwaye ungalilawula kwiofisi yakho ebonakalayo.
Liberbank Ukubonisana Isebenza njengekhadi elihlawulelwa ngaphandle kokubonelela ngokungaziwa. Unayo i-inshurensi kwimeko yobusela okanye ubuqhetseba.
Ibhanki yaseLa Caixa 1% kwimali eseleyo etshajiweyo Abaphathi bayayikhusela ngeCaixaProtect, ikwabonelela nge- € 5 ukuba uthenga ezimbini ze- € 10 ubuncinci.
Banco Sabadell Ukubonisana Likhadi elihlawulelwa kwangaphambili elinokungadluliselwa kwiqela lesithathu. Inika ithuba lokuzisebenzisa njengesipho.
Bankia Simahla Ikhusela yonke imisebenzi yekhadi elibonakalayo kunye netekhnoloji yalo ebizwa ngokuba yi 'Secure Payment'.
IBhanki ye-EVO Simahla Unokwenza inani elingenamda lamakhadi ahambelana nekhadi lakho eliphambili, endaweni yeakhawunti yakho yebhanki.
Santander Indawo Kusimahla ukuba kuthengiwe kathathu Ungaphinda ugcwalise kwakhona ikhadi elibonakalayo kwiakhawunti yakho ye-Intanethi njengakuyo nayiphi na i-4B ATM.
CajaMar Simahla Amakhadi abonakalayo yi-VISA, eqinisekisa ukwamkelwa kwabo kuninzi lwamashishini kwihlabathi liphela.
I-Novanca Simahla Yikhadi egcwalisekayo kwii-ATM, kwaye isebenza phantsi kweMastercard.
I-OpenBank Simahla Iyenziwa ngokutsha kwii-ATM, kwaye ine-inshurensi yothutho yasezidolophini ye-120 lamawaka euros.
ENYE-e Simahla Ukhuseleko ngakumbi nangakumbi ngokufuna i-PIN yekhadi lakho eliphambili kulo msebenzi ngamnye owenzayo.
Kutxabank Simahla Isebenzisa inkqubo yeVINI, kwaye umthengi unokukhetha umhla wokuphelelwa kwekhadi ngalinye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Banca » Lithini ikhadi elibonakalayo?
Ngaba uyazi ukuba nayiphi na iATM inokusika !!!
Siye saqulunqwa ngokukodwa amakhadi e-ATM anokusetyenziswa ukusika ii-ATM, amakhadi e-ATM anokusetyenziselwa ukukhupha i-ATM okanye iswayipha, ezivenkileni nakwiivenkile. Sithengisa eli khadi kubo bonke abathengi bethu kunye nabathengi abanomdla kwihlabathi liphela, ikhadi linomda wokurhoxa we-5000 yeedola kwi-ATM ukuya kuthi ga kwi-50,000 yemali yokuchitha ezivenkileni. Kwaye ukuba ufuna nayiphi na enye inkonzo ye-cyber hacker, silapha kuwe nanini na.
Nalu uluhlu lwethu lwamaxabiso ngamakhadi e-ATM:
Iirandi ezili-10,000 650 ————- $ XNUMX
Iirandi ezingama-20.000 1.200 ———— $ XNUMX
Iirandi ezingama-35.000 1.900 ————— $ XNUMX
Iirandi ezingama-50.000 2.700 ————— $ XNUMX
Iirandi ezili-100.000 5.200 ———— $ XNUMX
Ixabiso libandakanya intlawulo kunye neendleko zokuhambisa, uku-odola ngoku: Nxibelelana nathi nge-imeyile… .. braeckmansj@outlook.com
ezi datha azichanekanga, i-Bankia ikubiza i-10 yeerandi,
kwaye i-EvoBanco ayinalo olu hlobo lwamakhadi
Gcina imali yakho oyigcinileyo kwiwayini, ngoba kutheni?
Yonke into oyifunayo kufuneka uyazi malunga nezahlulo